बाशुदेव वस्ती, अपरेशन डाइरेक्टर, आईएसएमटी कलेज
सुरुमै तपाईलाई मेरो प्रश्न आईएसएमटी कलेज नै किन रोज्ने ?
आईएसएमटी कलेज सन् २०११ मा स्थापना भएको कलेज हो । यसबीचमा हामीले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरुले मार्केटमा के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा खोज्यौं भने पनि हामी कस्तो कलेज हौं भन्ने थाहा हुन्छ । हामीले युकेको डिग्री नेपालमै प्रदान गरिरहेका छौं । हामीले युके गएर डिग्री पढ्नेले जे पढिरहेका छन् त्यही पढाईमा कुनै सम्झौता नगरिकन यहाँ शिक्षा प्रदान गरेका छौं । गुणस्तरको सवालमा हामीले कुनै पनि सम्झौता गरेका छैनौं ।
हामीले अहिले तीन वटा ब्याचलर्सका प्रोग्रामहरु बीबीए, बीएचएम र बीएससीआईट संचालन गरिरहेका छौं । हाम्रो पाठ्यक्रम अन्य कलेजहरुको भन्दा भिन्न छ । हाम्रो पाठ्यक्रम मार्केट सुहाउँदो अझै भनौं ‘इन्डस्ट्री बेस्ड’ भएकोले विद्यार्थीहरु हामीकहाँ आउने गरेका छन् । त्यस्तै, यही डिग्री हामीले नेपालमै प्रदान गर्दा पूजिँ पलायनलाई केही हदसम्म रोकेका छौं । हामीले कलेज स्थापना गर्नुको एक उदेश्य यो पनि हो । आर्ईएसएमटीले तीन वर्षको कोर्षमध्ये दुई वर्ष नेपालमा पढेर तेस्रो वर्ष युके, युएसए अष्ट्रेलिया लगायतका देशमा गएर पनि पढ्न मिल्ने (क्रेडिट ट्रान्सफर)को वातावरण सृजना गरेको छौं । हाम्रो पाठ्यक्रमपछिको राम्रो विशेषता यो पनि हो ।
आईएसएमटीले नेपालमा ब्रिटिस डिग्री प्रदान त गरिरहेको छ । तपाईको बिचारमा नेपालमा ब्रिटिस डिग्रीको औचित्य के छ ?
यो प्रश्नको उत्तर मेरै उदाहरणबाट दिन चाहान्छु । मैले नेपालमा हाँसिल गरेको शिक्षाको कारण मनलागेको जागिर खान पाइन । मेरो प्रतिद्वन्द्वीको रुपमा सँधै विदेशमा डिग्री हाँसिल गरेकाहरु आउँथे । जब मैले युकेको डिग्री हाँसिल गरे तब मलाई सबै कम्पनीहरुले जागिरको अफर गरे । नेपालमा बाहिरका डिग्री होल्डरहरुलाई महत्व दिने प्रचलन छ । नेपालको पाठ्यक्रम पुरानो, समय सान्दर्भिक भएन भनेर मार्केटका कुराहरुलाई समाधान गर्न सक्ने खालको जनशक्तिको उत्पादन हालको पाठ्यक्रमले गर्छ भनेर कम्पनीहरुले विदेशी डिग्री होल्डरहरुलाई छान्ने गरेका छन् ।
त्यसोत, नेपालमा शैक्षिक बेरोजगारको दर बढेको छ । मास्टर पास गरेकाहरुले पनि जागिर पाएनन् भन्ने कुरा हामीले सुन्दै आएका छौं । सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्र विद्यार्थी अघि बढ्न सक्दैन त्यसैले प्रयोगात्मक ज्ञानको पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । हरेक विषयमा रिसर्च हुनु आवश्यक छ । कुनै पुस्तक वा गाइडबुकमा मात्रै सीमित रहेर आईएसएमटीमा पढाई हुँदैन । खोजमुलक पढाई पनि हामीकहाँ हुने गरेको छ ।
हाम्रो हरेक विद्यार्थीको उत्तर फरक–फरक हुनुपर्छ । समान उत्तर देखिएको खण्डमा सो उत्तर रद्व हुन्छ । रिसर्च बेस्ड पढाइ गर्दा हरेक विद्यार्थीको उत्तर–फरक आउँछ किनकी उसले बिभिन्न स्रोतबाट खोजेर रिसर्च पेपर वा असाइमेन्ट तयार पारेको हुन्छ । यसरी विद्यार्थी स्वयंले गरेको अध्यायनबाट कम्तीमा पास मार्क आए पनि उ बजारको लागि सक्षम हुन्छ । तर, हाम्रो नेपाली पाठ्यक्रमले शिक्षकले लेखाएको जस्तो वा पुस्तकमा लेखिएकोजस्तो उत्तर खोज्छ । क्लोज बुक एक्जामको आधारमा नतिजा दिइने प्रचलन छ । यसरी अध्यायन गरिरहेका विद्यार्थीहरुले समस्याको समाधान गर्न सक्दैनन् बरु विदेशी डिग्री लिनेहरुसँग जुनसुकै परिस्थितिलाई ह्याण्डल गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ भनेर कम्पनीहरुले पनि उनीहरुलाई नै प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् ।
पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीहरु भारत गएर पढ्ने प्रचलन पनि छ । नेपालमा भन्दा भारतमा राम्रो शिक्षा पाउने भएर हो ?
नेपालबाट भारत बढ्न जाने परम्परा निकै पहिलादेखिको हो । नेपालका कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि भारतबाटै शिक्षा लिएका उदाहरणहरु छन् । सो समयमा युरोप अमेरिका पढ्न जाने प्रचलन त्यति लोकप्रिय थिएन । हो, यो निकै लामो परम्परा यति चाँडै नतोडिन सक्छ । नेपालको राजनीतिक अवस्थाको कारण, विश्वविद्यालयहरुमा राजनीति नै हुने त हो नि भन्ने हिसावले केही विद्यार्थीहरु जो युरोप अमेरिका लगायतका देशमा विभिन्न कारणले जान सक्दैनन् । त्यस्ता विद्यार्थीहरु पनि भारत गएर पढ्ने चलन छ । त्यस्तै, अर्को कुरा नेपालका कतिपय अभिभावकहरुलाई नेपालमै विदेशी डिग्री लिन सकिन्छ भन्ने पनि थाहा छैन । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो भारतीय डिग्रीभन्दा ब्रिटिस डिग्री माथि नै छ । युके एजुकेशनमा रुल गरिरहेको देश हो । हामीलाई खुला सीमानाको कारण भारत जानको लागि सहज पनि छ । अर्को कुरा भनेको विद्यार्थीहरु पारिवारिक स्वतन्त्रताको लागि पनि भारत जाने प्रचलन छ ।
अर्को मुख्य कुरा, भारतीय कलेजहरुले बढाईचढाई गरेर नेपालमा मार्केटिङ गरिरहेका छन् । भारत सरकारले त्यहाँका विश्वविद्यालयहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्छ भनेर बाध्यात्मक नियम बनाइदिएको छ । संख्या पु¥याउने हिसावले नेपाली विद्यार्थीहरु भारतमा लगिएका छन् । छात्रावृद्धि, कामको ग्यारेन्टी तथा सुविधाको बहाना पनि विद्यार्थीहरुलाई त्यहाँ लगिएको छ । भारतीय कलेजहरुले नेपालमा एजेन्सीहरुलाई नै परिचालन गरेका छन् । एजेन्सीहरुले त्यस्ता कलेजहरुबाट कमिसन लिएका पनि छन् । सबै भारतीय कलेजहरु राम्रा छैनन् । त्यहाँका केही प्राविधिक कलेजहरु राम्रा छन् । तर, कतिपय नेपाली विद्यार्थीहरु भारत पुगेर ठगिएको महशुस गर्छन् । भारत गएका केही विद्यार्थीहरुले आत्महत्या गरेको कुरा, ठगिएको कुरा, त्यहा भेदभाव भएको कुरा पनि हामीले सुन्दै आएका छौं । तर, वास्तवमा अब पढ्नको लागि नेपाली विद्यार्थीहरु भारत जानुपर्ने अवस्था छैन । किनकी नेपालमा आईएसएमटीजस्ता कलेजहरु धेरै छन् जसले तीन वर्षमा ब्रिटिस डिग्री प्रदान गरिरहेको छ ।
नेपालमा ब्रिटिस डिग्री लिँदा र भारत गएर पढ्दा ‘फि’ मा कति फरक पर्छ ?
नेपालबाट भारतमा कुनै टेक्निकल विषय पढ्न जाँदा झण्डै ७–९ लाख भारतीय रुपैयाँ खर्च हुने गरको छ । त्यो भनेको करिब १५ लाख नेपाली रुपैयाँ हो । तर, हामीले नेपालमा धेरै सस्तोमा पढाइरहेका छौं । आईएसएमटीकै कुरा गर्ने हो भने सो प्राविधिक विषय ८–९ लाख नेपाली रुपैयाँमा पढ्न सकिन्छ ।
भारतमा होस्टलमा बसेर पढ्नुपर्छ । त्यहाँ बाहिर बसेर पढ्दा त्यहाँको अवस्था, वातावरण, रहनसहन लगायतका कुराहरुले प्रभावित बनाउन सक्छ । नेपालबाट भारत बढ्न जाँदा पनि त खर्च हुन्छ । यहाँ पढे आमाबुबाले पकाएको खाएर २४ सै घण्टा पढाइमा फोकस गर्न सक्छन् । त्यस्तै, सोही विषय युकेमा पढ्न जाँदा ६ महिनाको खर्चले तीन वर्ष नेपालमा बढ्न पुग्छ । हामाले परिवारसँगै बसेर गुणस्तरिय शिक्षा लिन सक्छौं भने किन अन्यत्र जानुप¥यो र !
मैले भूमिकामा पनि भने उच्च शिक्षाको नाममा पछिल्लो १० महिनामा मात्रै ३७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । विदेशी कलेजहरुको सम्बन्धन लिएर नेपालमा नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डिग्री लिन सकिन्छ भने किन अझै विद्यार्थीहरु विदेसिएका छन् त ?
नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश पढ्न जानुको मुख्य तीन कारण छन् । पारिवारिक पृष्ठभूमि बलियो भएकाहरु विदेशी डिग्री लिन जान्छन् र पढेपछि केही अनुभव लिएर नेपाल फर्केपछि पारिवारिक व्यापार व्यवसाय सम्हाल्छन् । अर्को नगन्य समूह पनि विदेश जान्छन् उनीहरुले अवसर पाए उतै गर्छन् र नेपाल फर्कन पनि तयार हुन्छन् । अर्को एउटा समूह छ, त्यो समूह विदेश जाने, पैसा कमाउने र उतै पलायन हुने समूह हो । यो समूह निकै ठूलो छ । उनीहरु ऋण लिएर पढ्न जाँछन् र ऋण तिर्नको लागि कमाउनु पर्ने बाध्यता छ । यो समूहले सुविधाको उपभोग गरेको मात्रै हामी देख्छौं । मेसिन हो कि मान्छेले काम गरिरहेका छन् त्यो हामी भुल्छौं । उनीहरुले पढाइलाई भन्दा कामलाई बढी ध्यान दिन्छन् किनकी ऋण पनि त तिर्नुप¥यो । विदेश जान चाहनेहरु जसरी पनि जान्छन् । यसमा कढाई चाँही गरिनुपर्छ ।
विद्यार्थीहरु धमाधम विदेश जाँदा मोटो रकम बाहिरिरहेको छ । तै पनि सरकार यस्तो जटिल विषयमा मौन बसेको भनेर शिक्षाविद्हरुले आरोप लगाएका छन् नि । यस विषयमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
आईएसएमटीको एउटा उदेश्य भनेको शिक्षाको नाममा बाहिर जाने पूँजि पलायन रोक्ने पनि हो । मलाई लाग्छ हामीले केही हदसम्म यो प्रवृत्तिलाई रोकेका पनि छौं । हामीकहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरु प्रायः विदेश जाने मनस्थितिमा हुन्छन् । उनीहरुले नेपालमा नै विकल्प पाएर रोकिएका हुन् । यदी आइएसएमटीमा पढदैनथे भने उनीहरु बाहिर नै जान्थे । नेपालमा हुने विद्यार्थीले पढाइमा फोकस गरे पुग्छ । कमाईमा फोकस गर्न नपर्ने हुनाले यसबीचमा उ परिपक्व बन्छ ।
यो विकराल प्रवृत्तिलाई रोक्नैपर्छ । संसारको जुनकुनै कुनामा गएर पढ्न अधिकारले दिएको छ तर, सोही विषयको पढाई नेपालमा नै पाइन्छ भने विदेश जानु जुरुरी छैन ।
खासमा नेपालमा कलेजहरु खोल्ने, पाठ्यक्रमहरु थपघट गर्ने लगायतका कार्यलाई सरकारले सहज बनाएको छैन भन्ने सुन्नमा आएको छ नि ?
नेपालको सरकारी काम गर्ने तरिका निकै गाह्रो छ । कसैले केही गर्न खोज्दा पनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ । सरकारी तवरबाट पनि सहयोग गर्ने प्रवृत्ति छैन । बाहिर कसैले केही गर्न खोजेको खण्डमा प्रकृया पु¥याए पुग्छ । त्यसपछि उसलाई केही समय अब्जरभेसनमा राखेर कामको रेखदेख गर्ने र आवश्यक सुधारको लागि सिफारिस गरिन्छ । यसरी उसले आधिकारिकता प्राप्त गर्छ । नेपालका सत्तारुढ दलले राष्ट्रिय भन्दा पनि राजनीतिक एजेण्डालाई अगाडि सारिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै प्रशासनका केही कर्मचारीले पनि चलखेल गर्न खोज्छन् । सबै व्यक्तिगत स्वार्थमा लागिरहेको हुनाले राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने कुरा गर्न सकिरहेका छैनन् । लगानी गर्ने र असफल भए पनि उठ्छु भन्नेहरुले मात्रै लगानी गरिरहेका छन् । यहाँको अवस्था ठिक हुने हो भने धेरै पढ्न गएकाहरु फकिन्छन् । यहाँ एउटा सानो कामको लागि पनि थुप्रै तनाव लिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, आईएसएमटीको आगामी योजनाहरु के–के छन् ?
आईएसएमटीका सबै पासआउट विद्यार्थीहरु सेटल भइसकेका छन् । हामीले यो ट्रेण्डलाई अझै बृहत बनाउने योजना बनाएका छौं जसको लागि हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने छौं । हामीले क्रेडिट ट्रान्सफरको लागि अन्य युर्निभसिटीहरुसँग पनि छलफल चलाएका छौं । अर्को कुरा भनेको हामीले पूर्व–देखि पश्चिमसम्मका मुख्य सहरहरुमा सबै विद्यार्थीहरुले सहज रुपमा शिक्षा लिन सकोस् भनेर कलेजको विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं ।